29. सूचना प्रविधि विधेयकको जोखिम
You are at Home Podcast 29. सूचना प्रविधि विधेयकको जोखिम
सूचनाना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र इन्टरनेट प्रविधिमार्फत जनतालाई राम्रो शासन प्रदान गर्न,जीवन सहज बनाउन,सिर्जनशील उधमको प्रवर्द्दन गर्न आउनु पर्ने हो। तर सकारात्मक नियमनका प्रस्तावहरु हुनुपर्नेमा हरेक बिषयमा नकरात्मक एप्रोचबाट नियन्त्रणका लागि कठोर र अब्यबहारिक प्राबधानहरु गरेको देखिन्छ।
हाल संसदको बिचराधिन रहेको यो बिधेयकमा हुनुपर्ने संशोधन र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा संसदमा उठाउनुपर्ने बिषयमा आजको पडकाष्टमा छलफल गरेका छौँ ।
छलफलमा ईन्टरनेट सिस्टमका अध्येता तथा अधिबक्ताहरु हेमपाल श्रेष्ठ, सन्तोष सिग्देल र संजिव घिमिरे हुनुहुन्छ । उहाँहरु तिनैजना इन्टरनेट अधिकारका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। साथमा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका जानकार फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहाल र म सहजमान श्रेष्ठ पनि आजको छलफलमा जुटेका छौँ।